Ukuphupha nge-gout Discover ➡ Discover Online ▷ ➡️
Nokuba umsebenzi ucoceke kangakanani, wenzeka ngokukhawuleza - usiba lomthombo luwela okanye lutyibilike ecaleni, kwaye ibala elikhulu, elisasazeka kancinci liyavela ephepheni. Sicinga ukuba ababhali abanamaxwebhu agutyungelwe ngamabala okungakhathali kunye nokungxama kakhulu.
Ayothusi into yokuba ibala leinki liyinxalenye yeziqhulo zabafundi. Ukwahluka kombala, kwelinye icala, kulungile kwaye bonwabile. Ukuba i-inki okanye ulwelo olufanayo luchithwe ezingubeni, zihlala zenza inkumbulo kangangexesha elide kuba umbala awunakususwa nasemva kokuhlamba izihlandlo ezininzi.
Funda apha ngezantsi ngeentsingiselo ezahlukeneyo ezinokuba nebala ekuchazeni amaphupha.
1 Uphawu lwephupha «ukuhla» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «ukuhla» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «ukuhla» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «ukuhla» - ukutolikwa ngokubanzi
Ukuba amabala avela njengophawu lwephupha, banokufuzisela amabala kwivenkile yomzekeliso yokuphupha kwaye kuthetha ukuba oku akuhlambulukanga kangako, kangangokuba ukuphupha kunento eyadlulayo. imposiso Akukho nto ayenzileyo, kodwa unokutolikwa gwenxa ngabantu abakhohlakeleyo. Mhlawumbi uyaboyika ukufumanisa yemfihlo encinci, nokuba yinyani nje yokuba ayifezekanga ngendlela othanda ukuba yiyo okanye injani
Kuxhomekeke kwimeko apho ibala liphupha khona, isenokuba ngabantu abathile abafuna ukulonakalisa iphupha okanye abo boyikisayo isimo sengqondo esinjalo.
Ukuba iphupha lihlanjwe nge-inki xa kubhalwa, oku kuyatolikwa, nangona kunjalo, kuchasene kakhulu. Ingangumqondiso wempazamo ezayo, umzekelo ukwenza impazamo, kunye nokubonisa (mhlawumbi ishishini) mpu melelo, kuba ibala le-inki linokumela ukungakhathali kunye namandla aphilayo. Ukutolikwa kuya kuvela kumxholo kwaye kuthelekiswa nemeko yangoku yephupha.
Uphawu lwephupha «ukuhla» - ukutolikwa kwengqondo
Amabala, ngakumbi kwiphepha elibhalwe ngokufanelekileyo, linokuwonakalisa umfanekiso omkhulu kwaye kuya kufuneka uqale kwakhona.
Ibala njengophawu lwephupha, ke, libhekisa kwi Yintlungu iimpazamo, ukwazi ukuba awufezekanga. Ngamanye amaxesha sizipeyinta kweyona mibala imnyama yendlela abanye abanokuphendula ngayo ukuba asilumkanga. Akukho mntu ugqibelele ngokwenene.
Mhlawumbi i-subconscious yakho ingathanda ukubonisa ukuba ungavumela "ezintlanu zichaneke" kube kanye. Okanye ngamanye amaxesha kuya kufuneka uphinde into ukuze uyiphucule, kwaye sukuncamaxa kuvela ibala elingathandekiyo.
Uphawu lwephupha «ukuhla» - ukutolika kokomoya
Kutolikwe ngokomoya, olu phawu lwephupha lutyhila ubuthathaka obufihliweyo nokunye eyinyani ingqalelo Ukhanyiselo alugcinelwanga imiphefumlo engenazimpazamo; Endaweni yoko, kubalulekile ukuba wazi kwaye ufunde kwiimpazamo zakho, kunokuba ujonge nje njengenkathazo eza kugutyungelwa.